Liverpool Oo Cashar U Dhigtay Leicester City, Diogo Jota Oo La Celin La’ Yahay & Klopp Oo Aan Tabin Todoba Xiddig Ee Ka Dhaawacan – Laacibnet.net
Liverpool Oo Cashar U Dhigtay Leicester City, Diogo Jota Oo La Celin La’ Yahay & Klopp Oo Aan Tabin Todoba Xiddig Ee Ka Dhaawacan
November 23, 2020 Balaleti
Liverpool ayaa soo bandhigtay mid ka mid ah qaab ciyaareedyadeedii ugu fiicnaa xilli ciyaareedkan iyagoo 3-0 ku xaaqay kooxda Leicester City xilli todoba xiddig oo waa weyn ay dhaawacyo iyo Korona Fayras kaga maqan yihiin.
Reds ayaa guusha uga mahadcelineysa gool uu iska dhaliyay daaficii hore ee Man United Jonny Evans iyo kubad madax aheyd oo uu dhaliyay xiddiga la celin la’ yahay Diogo Jota halka Roberto Firmini oo gool seddexaad ku soo qatimay iyadoo Liverpool ay birta garaacday seddex jeer.
Natiijadaan ayaa ka dhigan in Liverpool ay soo gashay kaalinta labaad iyagoo ku dhibco ah kooxda hogaanka heysa ee Tottenham oo ay wadagaan 20 dhibcood iyadoo Spurs ay farqiga goolasha ku horeyso.
Rikoodhka kulamada Premier League ee aan Liverpool looga badinin garoonkooda Anfield ayaa haatan sii maraya 64 kulan.
Tababaraha Liverpool ayaa lagu qasbay inuu bedel u raadiyo todoba xiddig oo dhaawac uga maqan shaxdiisa isagoo ku soo bilaabay James Milner oo buuxiyay booska Alexander-Arnold halka Matip iyo Fabinho ay buuxiyeen boosaska ay ka dhaawacan yihiin Joe Gomez iyo Virgl van Dijk halka Kieta iyo Jones ay buuxiyeen boosaska ay ka dhaawacan yihiin Henderson iyo Thiago Alcantara halka Jota uu buuxiyay booska Mohamed Salah oo Korona Fayras uu ku dhacay.
Xiddigaha uu aaminay Klopp ayaana noqday kuwa u abaalguday tababaraha iyagoo qaab ciyaareed aad loola dhacay ku soo bandhigay garoonka Anfield.
Saxiixii xagaagan ee Liverpool Diogo Jota ayaa wacdarro dhigay isagoo bilowgii ciyaarta ku qasbay goolhayaha Leicester inuu badbaadin fantastik ah sameeyo si ka mid ah da’ yarka Jones ka hor inta aysan Liverpool hogaanka ciyaarta kula wareegin kubad koorno aheyd oo uu iska dhaliyay Jonny Evans.
Seddex daqiiqo markii ay ka harsaneyd qeybtii hore ee ciyaarta ayay Liverpool sii dheereysatay hogaankeeda markii uu kubad uu soo qaaday Robertson uu madax ku dhaliyay Diogo Jota.
Jota ayaa noqday xiddigii ugu horeeyay ee shabaqa soo taabta afar kulan oo isku xigta uu ku ciyaaray garoonka Anfield horyaalka Premier League.
Goolka Jota ayaa sidoo kale yimid 30 baas oo xiriir ah oo ay Liverpool sameysay, waana baasaskii ugu badnaa ee ay Liverpool sameyso horyaalka Premier League ee gool isku bedela tan iyo xilli ciyaareedkii 2006-07.
Waxaa lagu kala nastay 2-0 oo ay hogaanka ku heysay kooxda difaacaneysa horyaalka ee Liverpool.
Liverpool ayaa wacdaraheeda sii wadatay qeybtii labaad ee ciyaarta iyagoo helay labo fursadood oo isku xigta oo gool loo fishay, marka hore kubad halis aheyd oo ka timid Jota ayaa waxaa badbaadiyay goolhaye Schmeichel ka hor inta aysan kubada u soo laabanin xiddiga reer Portugal kaasoo karoos u dhigay Firmino laakiin waxaa uga hormaray Evans oo madaxeeyay kuna dhawaaday inuu gool labaad iska dhaliyo iyadoo kubada ay ku dhacday birta
Liverpool ayaa daqiqiadii 77aad labo jeer oo isku xigta birta garaacay, Marka hore Firmino oo kubad ka helay Jota ayaa kubad hoos birta ku garaacay, isaga ayay ku soo laabatay wuxuuna damcay inuu kubada shabaqa ku taabto laakiin waxaa darbo ku soo bixiyay Albrighton iyadoo kubada uu helay Saido Mane oo isna markii darbo goolka la beegtay waxay kubada ku dhacday ciyaaryahan kale ka hor inta aysan birta ku dhicin islamarkaana u soo laabanin goolhaye Schmeichel.
Daqiiqadii 83aad Mane oo ka soo xarooday garabka midig ayaa kubad gantaal ah oo halis aheyd goolka ku tuuray, waxaa soo bixiyay goolhaye Schmeichel iyadoo Firmino uu lugta la waayay kubadii ku celiska u baahneyd.
Liverpool ayaa goolka seddexaad heshay daqiiqadii 86aad markii uu Roberto Firmino madax ku dhaliyay kubad koorno aheyd oo uu soo qaaday James Milner.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-0 oo ay Liverpool ku garaacday Leicester City.
Mohamed ali xasan says:
Walhaya qolyahin laacib waad iska hadashaan fekerkiina ayaa hadashaan mee farmino ka sheekeya qof gool dhaliyey arin maahe laacib khadka dhrxe taganaa cawa farmino maad nooga shekeysaan.